Madaxweynihii dalka Bolivia oo iscasilay iyo Melleteriga oo talada la wareegay.
Monday November 11, 2019 - 10:30:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynihii dalka Bolivia ninka lagu magacabo Evo Morales ayaa ku dhawaqay is casiladiisa kadib dibad baxyo xooggan oo dalkaas ka dhacay kuwaas oo loogasoo horjeeday natiijada doorashadii dhawan ka dhacday dalka Bolivia.
Ku dhawiqista is casiladi Morales ayaa timid saacada kadib markii ciidanka military-ga ay ku dhawaaqeen in ay laga maarmaan tahay in Madaxweynaha uu xilka iskaga tago si dalka looga hir galiyo doorasho hor leh, loona joojiyo dibad baxyada rabshadaha wata ee dalkaasi ka soconaya.
Madaxweyne Morales oo ah 60 Sano jir ah ayaa TV-ga dowlada ka xaqiijiyey iscasilaadiisa wuxuuna habeenkii xalay ahaa bulshada dalka ku yiri "Waan Iskaga tagay xilka madaxtinimada, anigoo soo dhaweynaya dalabadka dadweynaha" inkastoo ku xigenkiisa uu shegay, in waxa dalka ka dhacay ay ahaayeen afgambi military.
Al faro Garsiya oo ah Madaxweyne ku xigenka dalka Bolivia oo isna kamid ahaa dadka is casilay ayaa shegay in Afgambi uu ka dhacay dalka waxaana lagusoo warramayaa in sidoo kale golihii wasiirada lakala diray, Siyaasiyintii ka ag dhawaa madaxweynahana ay u kala firxadeen wadamada dibadda.
Evo Morales ayaa xilka ka tagay iyadoo ay dalka ka jirto xaalad qasan ayna soconayaan dibad baxyo waaweyn kuwaas oo ka dhashy guushii uu dhawaan ka gaaray doorashada ka dhacday Bolivia taas oo ka dhigneyd in markii 4aad oo uu noqdo madaxweynaha dalkaasi.